Nkeji edemede na-adịghị asọmpi: gịnị ka ị kwesịrị ịma? - Law & More B.V.
blog » Nkebi nke enweghị asọmpi: gịnị ka ị kwesịrị ịma?
Nkebi nke enweghị asọmpi: gịnị ka ị kwesịrị ịma?
Nkeji nke na-abụghị asọmpi, nke a na-ahazi na nka. 7: 653 nke Usoro Obodo Dutch, bụ oke mmachi nke nnwere onwe ịhọrọ ọrụ nke onye were gị n'ọrụ nwere ike ịgụnye na nkwekọrịta ọrụ. E kwuwerị, nke a na -enye onye ọrụ ohere machibido onye ọrụ ịbanye ọrụ nke ụlọ ọrụ ọzọ, ma ọ bụ na ọ dị n'otu mpaghara, ma ọ bụ ọbụna ịmalite ụlọ ọrụ nke ya mgbe ngwụcha nkwekọrịta ọrụ. N'ụzọ dị otu a, onye were ya n'ọrụ na-anwa ichebe mmasị ụlọ ọrụ yana idobe ihe ọmụma na ahụmịhe n'ime ụlọ ọrụ, ka ha ghara iji ha rụọ ọrụ na gburugburu ọrụ ọzọ ma ọ bụ dị ka onye na-arụrụ onwe ya ọrụ. Nkebi ahịrịokwu dị otú ahụ nwere ike ịbara onye ọrụ uru nke ukwuu. Ị bịanyela aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ọrụ nke nwere nkebiokwu na-abụghị asọmpi? N'okwu ahụ, nke a apụtaghị na onye were gị n'ọrụ nwere ike ijide gị na nkeji okwu a. Onye omebe iwu ewepụtala ọtụtụ ụzọ mmalite na ụzọ ọpụpụ iji gbochie mmegbu na nsonaazụ na -ezighi ezi. Na blọọgụ a anyị na-atụle ihe ịkwesịrị ịma gbasara nkebiokwu na-adịghị asọmpi.
Na mbụ, ọ dị mkpa ịmara mgbe onye were gị n'ọrụ nwere ike ịgụnye ahịrịokwu na-abụghị asọmpi wee si otu a ruo mgbe ọ dị ire. Nkeji nke na-abụghị asọmpi dị mma naanị ma ọ bụrụ na ekwenyela ya na ide na- okenye onye ọrụ abanyela nkwekọrịta ọrụ maka otu oge ebighi ebi (ewepụrụ iche).
Ụkpụrụ bụ isi bụ na enweghị ike itinye ahịrịokwu na-abụghị asọmpi n'ime nkwekọrịta ọrụ nwa oge. Naanị n'ọnọdụ pụrụ iche ebe enwere mmasị azụmaahịa siri ike nke onye were ya n'ọrụ na-akwalite nke ọma, a na-ahapụ ahịrịokwu na-abụghị asọmpi na nkwekọrịta ọrụ maka oge a kapịrị ọnụ. Enweghị mkpali, ahịrịokwu na-abụghị asọmpi abaghị uru ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ chere na mkpali ahụ ezughi oke, enwere ike nyefee ya n'ụlọ ikpe. A ga -enyerịrị mkpali mgbe ekwesịrị nkwekọrịta nkwekọrịta ọrụ yana enweghị ike inye ya ma emechaa.
Na mgbakwunye, ahịrịokwu na-abụghị asọmpi ga-abụrịrị, dabere na nka. 7: 653 BW paragraf nke 1 sub b, na ederede (ma ọ bụ site na ozi-e). Echiche dị n'azụ nke a bụ na onye ọrụ ahụ na -aghọtazi ihe ga -esi na ya pụta na ọ dị mkpa ma jiri nlezianya tụlee ahịrịokwu ahụ. Ọbụlagodi ma ọ bụrụ na akwụkwọ bịanyere aka n'akwụkwọ (dịka ọmụmaatụ nkwekọrịta ọrụ) na -ezo aka na atụmatụ ọnọdụ ọrụ agbakwunyere nke nkebiokwu ahụ so na ya, a ga -emezu ihe achọrọ, ọbụlagodi na onye ọrụ abịanyeghị aka na atụmatụ a iche. Nkebi nke na-abụghị asọmpi gụnyere na nkwekọrịta ọrụ mkpokọta ma ọ bụ n'ozuzu usoro na ọnọdụ anaghị adị mma ọ gwụla ma enwere ike iburu n'uche na nkwado dị ka ekwuru.
Ọ bụ ezie na ndị na-eto eto site na afọ iri na isii nwere ike banye na nkwekọrịta ọrụ, onye ọrụ ga-abụrịrị afọ iri na asatọ iji banye na nkebi enweghị asọmpi.
Ọdịnaya nkebiokwu asọmpi
Agbanyeghị na ahịrịokwu ọ bụla na-abụghị asọmpi dị iche dabere na mpaghara, ọdịmma metụtara yana onye were ya n'ọrụ, enwere ọtụtụ isi ihe agụnyere na ọtụtụ ahịrịokwu na-abụghị asọmpi.
Ogologo oge. A na -ekwukarị na nkeji ole afọ ka amachibidoro ụlọ ọrụ asọmpi ọrụ, nke a na -agbadata afọ 1 ruo afọ abụọ. Ọ bụrụ na edobere oke oge ezi uche adịghị, onye ọka ikpe ga -ahazi nke a.
Ihe a machibidoro iwu. Onye were gị n'ọrụ nwere ike họrọ igbochi onye ọrụ ka ọ ghara ịrụ ọrụ maka ndị asọmpi niile, mana ọ nwekwara ike ịkpọ aha ndị asọmpi pụrụ iche ma ọ bụ gosipụta okirikiri ma ọ bụ mpaghara ebe onye ọrụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ yiri ya. A na -akọwakarị ya ihe ụdị ọrụ ahụ nwere ike ọ gaghị arụ.
Ihe ga -esi n'imebi ahịrịokwu ahụ pụta. Nkebiokwu ahụ na-enwekarị nsonaazụ nke imebi ahịrịokwu na-abụghị asọmpi. Nke a na -agụnyekarị ntaramahụhụ nke ego ole. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na -atụnyekwa ntaramahụhụ: ego a ga -akwụrịrịrịrị kwa ụbọchị onye ọrụ ahụ dara iwu.
Mbibi nke onye ọka ikpe
Onye ikpe na -agbaso usoro nka. 7: 653 nke Usoro Obodo Dutch, paragraf nke 3, ohere ịkagbu ahịrịokwu na-abụghị asọmpi n'ozuzu ya ma ọ bụ akụkụ ya ma ọ bụrụ na ọ nwere ọghọm na-enweghị isi maka onye ọrụ nke na-adabaghị n'ọdịmma onye were ọrụ ka echebe ya. Onye ọka ikpe ga -ahazi ogologo oge, mpaghara, ọnọdụ na ego ole ọ dị mma. Nke a ga -agụnye ịtụle ọdịmma onye ọka ikpe, nke ga -adị iche na ọnọdụ ọ bụla.
Ọnọdụ ndị metụtara na ọdịmma nke onye ọrụ nke na -ekere òkè bụ ihe ahịa ahịa dị ka ohere na -ada ada n'ahịa ọrụ, mana enwere ike iburu n'uche ọnọdụ onwe onye.
Ọnọdụ ndị metụtara na ọdịmma nke onye were gị n'ọrụ nke na -arụ ọrụ bụ nka na njiri mara pụrụ iche nke onye ọrụ yana uru dị n'ime azụmaahịa. Na omume, nke ikpeazụ na-agbadata ajụjụ a ma ọ ga-emetụta usoro azụmaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ, a na-ekwusi ike na ebumnuche nkebi asọmpi abụghị idobe ndị ọrụ n'ime ụlọ ọrụ ahụ. 'Naanị eziokwu na onye ọrụ enwetala ihe ọmụma na ahụmịhe n'ịrụ ọrụ ọnọdụ ya apụtaghị na emetụta ọrụ azụmaahịa nke onye were ya n'ọrụ mgbe onye ọrụ ahụ hapụrụ, ma ọ bụ mgbe onye ọrụ ahụ hapụrụ onye asọmpi. . ' (Hof Arnhem-Leeuwarden 24-09-2019, ECLI: NL: GHARL: 2019: 7739) A na-emetụta ọnụego ọrịre azụmaahịa ma ọ bụrụ na onye ọrụ maara ozi dị mkpa na azụmaahịa dị mkpa ma ọ bụ usoro ọrụ na atụmatụ pụrụ iche yana ọ nwere ike iji nke a. ihe ọmụma maka abamuru nke onye ọrụ ọhụrụ ya, ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, mgbe onye ọrụ ahụ nwere ezigbo mmekọrịta na ndị ahịa nke na ha nwere ike ịgbanwere ya wee bụrụ onye asọmpi.
A ga-eburu n'uche oge nkwekọrịta ahụ, nke bidoro nkwụsị, yana ọnọdụ onye ọrụ na onye were ya n'ọrụ gara aga mgbe ụlọ ikpe tụlere izi ezi nke ahịrịokwu na-abụghị asọmpi.
Omume dị oke egwu
Nkebi nke na-abụghị asọmpi, dabere na nka. 7: 653 nke Usoro Ọchịchị Dutch, paragraf nke 4, anaghị eguzo ma ọ bụrụ na nkwụsị nke nkwekọrịta ọrụ bụ n'ihi oke arụrụ arụ ma ọ bụ nhapụ nke onye were ya n'ọrụ, nke a agaghị abụ ikpe. Dịka ọmụmaatụ, nnukwu mpu ma ọ bụ mfu dị adị ma ọ bụrụ na onye were ya n'ọrụ mara ikpe nke ịkpa oke, emezughị ọrụ mwebata na ihe omume nke ọrịa onye ọrụ ma ọ bụ lebara anya nke ọma na ọnọdụ ọrụ adịghị mma yana ahụike.
Nkọwa Brabant/Van Uffelen
Ọ pụtawo ìhè site na mkpebi Brabant/Uffelen na ọ bụrụ na enwere nnukwu mgbanwe na mmekọrịta ọrụ, a ga-abịanye aka n'akwụkwọ nke na-abụghị asọmpi ma ọ bụrụ na ahịrịokwu asọmpi na-adịwanye arọ n'ihi ya. A na -ahụ ọnọdụ ndị a mgbe ị na -etinye ụkpụrụ Brabant/Van Uffelen:
nke a na -atụghị anya ya;
n'ihi na nkebi nke na-abụghị asọmpi abụrụla ihe dị arọ
Ekwesịrị ịkọwa 'mgbanwe ahụ siri ike' nke ukwuu, yabụ na ọ gaghị eche naanị maka mgbanwe ọrụ. Otú ọ dị, na omume a anaghị ezutekarị usoro nke anọ. Nke a bụ ikpe, dịka ọmụmaatụ, n'okwu nke ahịrịokwu na-abụghị asọmpi kwuru na ekweghị ka onye ọrụ rụọ ọrụ maka onye asọmpi (ECLI: NL: GHARN: 2012: BX0494). Ebe ọ bụ na onye ọrụ ahụ enweela ọganihu site na makanị ruo onye na -ere ahịa n'oge ọ na -arụrụ ụlọ ọrụ ahụ, ahịrịokwu ahụ gbochiri onye ọrụ ahụ n'ihi mgbanwe ọrụ karịa n'oge ịbinye aka. A sị ka e kwuwe, ohere dị n'ahịa ọrụ ugbu a ka ukwuu maka onye ọrụ karịa ka ọ dị na mbụ.
Ọ dị mkpa iburu n'uche ebe a na n'ọtụtụ ọnọdụ, ahịrịokwu na-abụghị asọmpi na-akagbu naanị akụkụ ya, ya bụ na ọ bụrụla na ọ na-ebuwanye ibu n'ihi mgbanwe ọrụ.
Nkeji edemede na-abụghị arịrịọ dị iche na nkebiahịrị na-abụghị asọmpi, mana ọ yitụrụ ya. N'ihe gbasara nkebughị ịrịọ arịrịọ, amachibidoghị onye ọrụ ịga ọrụ maka onye asọmpi ka emechara ọrụ, kama site na ịkpọtụrụ ndị ahịa yana mmekọrịta ụlọ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, nke a na -egbochi onye ọrụ ka ya na ndị ahịa ya na ya nwee ike wulite mmekọrịta n'oge ọrụ ya ma ọ bụ ịkpọtụrụ ndị na -eweta ngwaahịa dị mma mgbe ọ na -amalite azụmahịa nke ya. Ọnọdụ ikpe asọmpi a tụlere n'elu na-emetụta nkebiokwu na-abụghị arịrịọ. Nkebiokwu na-arịọghị arịrịọ bụ naanị ma ọ bụrụ na ekwenyela ya na ide na- okenye onye ọrụ abanyela nkwekọrịta ọrụ maka otu oge ebighi ebi nke oge.
Ị bịanyela aka n'akwụkwọ nkwekọrịta na-abụghị asọmpi ma ịchọrọ ma ọ bụ nwee ọrụ ọhụrụ? Biko kpọtụrụ Law & More. Ndị ọka iwu anyị bụ ndị ọkachamara n'ihe gbasara iwu ọrụ ma nwee obi ụtọ inyere gị aka.
Previous Post Iwu Nkwụnye ego na usoro ya
Next Post Ego nkwụghachi ụgwọ maka nkwekọrịta ọrụ: kedu ka ọ si arụ ọrụ?